လေ့လာမှုအသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်မကျန်းအကြားမျိုးရိုးဗီဇ link ကိုရှာတွေ့မှဆိုပါတယ် - သတင်း Rule
လေ့လာမှုအသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်မကျန်းအကြားမျိုးရိုးဗီဇ link ကိုရှာတွေ့မှဆိုပါတယ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “လေ့လာမှုအသစ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်မကျန်းအကြားမျိုးရိုးဗီဇ link ကိုရှာတွေ့မှဆိုပါတယ်” Ian ကနမူနာသိပ္ပံအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္လာနေ့ 8th ဇွန်လအပေါ်အဆိုပါဂါးဒီးယန်းများအတွက် 2015 17.04 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးအမှတ်စေရန်ပထမဦးဆုံးခဲ့ကြ. ရှိတ်စပီးယားလည်းအလားအလာထမြောက်စေတော်. သို့သော်သခင် Byron ခဲ့သည်, ဖြစ်ကောင်း, သူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့၏အများဆုံးတိုက်ရိုက်: "ဟုအဆိုပါယာဉ်၏ငါတို့ရှိသမျှသည်အရှုးဖြစ်၏,"ဟုသူက Blessington ၏ Countess သို့ပြောသည်, သူ၏အပေါင်းအဘော်ကကဗျာဆရာတွေကိုအုပ်စိုးသတိထားမျက်စိ ချ..
အညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများအနုပညာရှင်၏အယူအဆဟာခေါင်းမာ meme ဖြစ်ပါသည်. ဖန်တီးမှု, ကဤသို့ဖော်ပြသည်, အနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အမှောင်နာရီအတွင်း wrestle သောနတျဆိုးသဖြင့်လောင်စာဖြစ်ပါတယ်. စိတ်ကူးတောင်သိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများကဖို့စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်လေ့လာမှုအသစ်အားလုံးပြီးနောက် link ကိုကောင်းစွာတည်ထောင်စေခြင်းငှါဆို, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA ကို၏လိမ်မော်လီကျူးသို့စာဖြင့်ရေးသား.
တနင်္လာနေ့ကထုတ်ဝေသောကြီးမားသောလေ့လာချက်များတွင်, အိုက်စလန်အတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာစိတ်ကြွရောဂါနှင့်အပါအဝငျက၏အန္တရာယ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇအချက်များဖန်တီးမှုအသက်မွေးဝမ်းထဲမှာလူအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏတွေ့သမျှသောသတင်းပို့. ပန်းချီဆရာ, ဂီတသမား, စာရေးဆရာများနှင့်သိပ်ပြီးမခဲ့ကြ, ပျမ်းမျှအားဖြင့်, 25% သိပ္ပံပညာရှင်လျော့နည်းဖန်တီးမှုဖြစ်စစ်ကြောစီရင်အသက်မွေးဝမ်းထက်ဗီဇမျိုးကွဲသယ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိ, တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်ကြသည်သောသူတို့တွင်, လက်စွဲလုပ်သားများနှင့် salespeople.
Kari Stefansson, ဒီကုဒ်ဒါ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ, ရဂ်ဂျူဗစ်အခြေစိုက်မျိုးရိုးဗီဇကုမ္ပဏီ, တွေ့ရှိချက်ကဆိုသည်, ဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လျို့ဝှက်, အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအဘို့ဘုံဇီဝဗေဒမှအမှတ်. "ဖန်တီးမှုဖြစ်ရန်, သငျသညျကွဲပြားခြားနားထင်ရန်ရှိသည်,"ဟုသူကဂါးဒီးယန်းကပြောပါတယ်. "ထိုအခါသောအခါကြှနျုပျတို့ကွဲပြားခြားနား, ကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းတံဆိပ်ကပ်ခံရဖို့တစ်ဦးစိတ်သဘောထားရှိသည်, အရူးနှင့်ပင်ရူး။ "
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များမှမျိုးဗီဇနှင့်ဆေးဝါးသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်ဆွဲငင် 86,000 အပါအဝငျက၏ပျမ်းမျှအန္တရာယ်နှစ်ဆကမျိုးဗီဇမျိုးကွဲကိုရှာဖွေရန်အိုကျ, တတိယထက်ပိုပြီးအားဖြင့်စိတ်ကြွရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့်. သူတို့ကဤမျိုးကွဲအမျိုးသားရေးအနုပညာလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များရှိကြ၏ဘယ်လိုဘုံမှာကြည့်ရှုသောအခါ,, သူတို့တစ်တွေကိုတွေ့ 17% Non-အဖွဲ့ဝင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးလာ.
အဆိုပါသုတေသီများသည်နယ်သာလန်နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပကြီးမားသောဆေးကုသမှု databases ကိုမှာသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်စစျဆေးဖို့သွားလေ၏. ယင်းတို့အနက် 35,000 လူထု, ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသူတို့အ (အလုပ်အကိုင်အားဖြင့်သို့မဟုတ်တစ်မေးခွန်းလွှာမှအဖြေကိုတဆင့်) နီးပါးခဲ့ကြ 25% စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါမျိုးကွဲသယ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိ.
Stefansson မျိုးဗီဇ၏ရမှတ်များအအပါအဝငျက၏အန္တရာယ်နှင့်စိတ်ကြွရောဂါတိုးမြှင့်ယုံကြည်သည်. ဤရွေ့ကားလူအတော်များများထင်သောလမ်းကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လူအများစုအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအလျှင်းမပြုကြ. သို့သော်အဘို့ 1% လူဦးရေရဲ့, မျိုးရိုးဗီဇအချက်များ, ဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့်အခြားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြဿနာတွေအတွက် culminate နိုင်, စိတ်ရောဂါနှင့်တစ်ဦးရောဂါ.
"မကြာခဏဆိုသလို, လူသစ်ကိုတစ်ခုခုဖန်တီးခြင်းကြသောအခါ, သူတို့စိတ်ဖောက်ပြန်နှင့်စိတ္တဇအကြား straddling တက်အဆုံးသတ်,"Stefansson ကပြောပါတယ်. "ငါသည်ဤသူတို့ရလဒ်များအရူးပါရမီ၏အဟောင်းအယူအဆကိုထောကျပံ့ထင်. ဖန်တီးမှုကျွန်တော်တို့ကိုမိုဇတ်ပေးတော်မူပြီတဲ့အရည်အသွေး, Bach, Van Gogh သည်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောသောအရည်အသွေးမြင့်င်. သို့သော်ထိုသို့တစ်ဦးချင်းစီမှတစ်ဦးစွန့်စားမှာလာ, နှင့် 1% လူဦးရေရဲ့ထိုသို့စျေးနှုန်းပေးဆောင်။ "
Stefansson ကသူ့လေ့လာမှုကိုစိတ်ရောဂါနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုသည်အမျိုးဗီဇမျိုးကွဲများအကြားတစ်ခုသာအားနည်းနေ link ကိုတွေ့ခံ. ထိုသို့အခြားသိပ္ပံပညာရှင်တွေပေါ်တက်ခူးသောဤဖြစ်ပါတယ်. စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏အန္တရာယ်ပြုစုပျိုးထောင်သောမျိုးဗီဇအကြောင်းအချက်များနှင့် ပတ်သက်. သာရှင်းပြခဲ့သည် 0.25% လူမျိုး '' အနုပညာစွမ်းရည်အတွက်အပြောင်းအလဲ၏, လေ့လာမှုကိုတွေ့. ဒါဝိဒ်သည် Cutler, အတ္တလန်တာအတွက် Emory တက္ကသိုလ်က geneticist, ရှုထောင့်၌အရေအတွက်တတ်၏: "ငါ့ကိုအကြားအကွာအဝေး အကယ်., သငျသညျတွေ့ဆုံရန်သွားကြသည်အနည်းဆုံးအနုပညာပုဂ္ဂိုလ်, တစ်ကယ့်အနုပညာရှင်တစ်မိုင်ဖြစ်ပါသည်, ဤအမျိုးကွဲစုပေါင်းရှင်းပြဖို့ပေါ်လာ 13 အကွာအဝေး၏ခြေရင်း,"ဟုသူကဆိုသည်.
ပန်းချီဆရာရဲ့ဖန်တီးမှုအသွင်အများစုဟာ, ထိုအခါ, ဆင်းကွဲပြားခြားနားသောမျိုးဗီဇအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်အခြားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှလုံးဝမ, ထိုကဲ့သို့သောဘဝအတှေ့အကွုံအဖြစ်, သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုခရီးစဉျတှငျသူတို့ကို ထား..
Stefansson များအတွက်, စိတ်ရောဂါနဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှု၏ဇီဝဗေဒအကြားပင်သေးငယ်တဲ့ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. "ဒါဟာကောင်းသောအရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာ၌ရသည်ဟုဆိုလိုသည်, ဖန်တီးမှုမှတဆင့်, အဘိုးမှာလာ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီဝဗေဒမှကြွလာသောအခါအကြှနျုပျကိုပြောတယ်, we have to understand that everything is in some way good and in some way bad,"ဟုသူကဆိုသည်.
ဒါပေမဲ့ Albert Rothenberg, professor of psychiatry at Harvard University is not convinced. He believes that there is no good evidence foralink between mental illness and creativity. “It’s the romantic notion of the 19th century, that the artist is the struggler, aberrant from society, and wrestling with inner demons,"ဟုသူကဆိုသည်. “But take Van Gogh. He just happened to be mentally ill as well as creative. ကျွန်တော့်အတွက်, the reverse is more interesting: creative people are generally not mentally ill, but they use thought processes that are of course creative and different.”
If Van Gogh’s illness wasablessing, the artist certainly failed to see it that way. In one of his last letters, he voiced his dismay at the disorder he fought for so much of his life: "အိုး, if I could have worked without this accursed disease – what things I might have done.”
တွင် 2014, Rothernberg publishedabook, "Flight of Wonder: an investigation of scientific creativity", in which he interviewed 45 science Nobel laureates about their creative strategies. He found no evidence of mental illness in any of them. He suspects that studies which find links between creativity and mental illness might be picking up on something rather different.
“The problem is that the criteria for being creative is never anything very creative. Belonging to an artistic society, or working in art or literature, does not proveaperson is creative. But the fact is that many people who have mental illness do try to work in jobs that have to do with art and literature, not because they are good at it, but because they’re attracted to it. And that can skew the data,"ဟုသူကဆိုသည်. “Nearly all mental hospitals use art therapy, and so when patients come out, many are attracted to artistic positions and artistic pursuits.”
21571	0 အပိုဒ်, မျိုးရိုးဗီဇ, မှ Ian နမူနာ, စိတ်ကျန်းမာရေး, သတင်း, Schizophrenia, သိပ္ပံ, Van Gogh သည်
← အနောက်ဘက်တွင်ထိပ်ဆုံးလေးခေတ်မီလူသတ်သမား ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အလားအလာပထမဦးဆုံးလူ့ဦးခေါင်းအစားထိုးအမေရိကန်ဆရာဝန်များမှအစေးကို →
£ 1,000 များအတွက်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အတွက်အကောင်းဆုံးကို PC ကဘာလဲ?